Ahoana ny fikajiana ny sandan'ny andavanandron'ny mpampiasa fampiharana finday | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 22, 2016 Alatsinainy, Aogositra 22, 2016 Douglas Karr
Manana fanombohana, orinasa miorina, ary na dia analytics be sy be pitsiny aza izahay izay tonga aty aminay mba hanampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasan-tserasera. Na firy na firy, na firy, rehefa manontany momba azy ireo isika vidim-isan-fahazoana ary ny lanja mandritra ny androm-piainana (LTV) an'ny mpanjifa iray, matetika no mihaona aminà maso mibaribary isika. Betsaka ny orinasa manisa ny tetibola amin'ny fomba tsotra:
Miaraka amin'io fomba fijery io dia miakatra hatrany amin'ny tsanganana fandaniana ny varotra. Saingy ny marketing dia tsy fandaniam-bola toa ny hofan-trano… fampiasam-bola tokony hiasa hampandroso ny orinasanao. Mety halaim-panahy hikajiana ianao fa ny vola vidiana hahazoana mpanjifa vaovao dia vola dolara iray, ary avy eo ny tombony azo dia ny vola azonao tamin'ny fividianan'izy ireo. Ny olana amin'izany dia matetika ny mpanjifa tsy mividy na dia iray aza. Ny fahazoana ny mpanjifa no ampahany sarotra, fa ny mpanjifa sambatra kosa tsy mividy indray mandeha fotsiny ary miala - mividy bebe kokoa ary mijanona ela kokoa.
Inona ny sanda andavanandron'ny mpanjifa (CLV na CLTV) na ny androm-piainana (LTV)?
Ny sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifa (CLV na matetika CLTV), ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany (LCV), na ny sandan'ny androm-piainana (LTV) no tombony azo isaina omen'ny mpanjifa ny orinasanao. Ny LTV dia tsy voafetra amin'ny fifanakalozana na vola isan-taona, ao anatin'izany ny tombony azo nandritra ny fotoana nifandraisanao tamin'ny mpanjifa.
Inona ny raikipohy hikajiana ny LTV?
LTV = Sarobidy mandritra ny androm-piainana
ARPU = Karama antonony isaky ny mpampiasa. Ny vola azo dia azo avy amin'ny sarany fampiharana, fidiram-bola miorina amin'ny famandrihana, fividianana ao anaty app, na fidiram-bola amin'ny dokam-barotra.
Churn = Ny isan-jaton'ny mpanjifa very nandritra ny fotoana iray. Ny fisoratana anarana mifototra amin'ny famandrihana dia matetika manome isan-taona ny vola miditra, ny vola ary ny fandaniana.
Raha mamorona rindranasa finday ianao dia ity misy infographic avy amin'ny Dot Com Infoway - Manisa ny sandan'ny fiainana (LTV) an'ny mpampiasa App anao amin'ny marika sy fahombiazana lehibe - izay manome fitsangatsanganana amin'ny fandrefesana ny LTV an'ny mpampiasa fampiharana findainao. Izy io koa dia manome fomba vitsivitsy hampihenana ny churn sy hampitomboana ny tombom-barotra.
Tsy misy isalasalana ny amin'ny maha-betsaka ny olona mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny Internet amin'ny fampiharana finday. Na dia mety hidika ho mpampiasa bebe kokoa amin'ny fampiharana anao aza izany dia tsy midika izany fa hahazo tombony daholo ny mpampiasa anao. Toy ny marina amin'ny ankamaroan'ny maodelin'ny orinasa, ny fidiram-bola 80% dia avy amin'ny mpampiasa 20%. Ny fandrefesana ny LTV an'ny mpampiasa dia afaka manampy ny mpamorona fampiharana hampihenjana ny mpampiasa azy ireo indrindra ary mamorona tolotra sy fampiroboroboana ho valisoa ny tsy fivadihan'izy ireo hampitombo ny fihazonana azy ireo. Raja Manoharan, Dot Com Infoway
Raha vantany vao azonao ny sandan'ny mpanjifanao mandritra ny androm-piainany, refesinao ny tahan'ny volanao, hamakafakao ny vidiny hahazoana mpanjifa, dia ho azonao ny fampiasam-bola ataonao sy ny averimberin'io fampanjariam-bola io.
Azonao atao ny manamboatra ny fanovana amin'ny iray na amin'ireo miovaova rehetra. Mety mila mampitombo ny vidin'ny serivisinao ianao mba hitazomanaanao tombony ara-pahasalamana. Mety mila mampiasa vola bebe kokoa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ianao hitazomana ny mpanjifanao lava kokoa ary hampitombo ny vola miditra amin'ny app na maharitra. Mety mila miasa ianao mba hampihenana ny vidin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny paikady biolojika sy fiarovana. Na mety ho hitanao fa afaka mandany vola bebe kokoa amin'ny paikadin'ny fahazoana karama ianao.
Tags: kajychurntaha churnCLTVCLVvidiny isaky ny fahazoanafahazoana mpanjifafitazonana ny mpanjifadcidot com infowayraikipohyahoana ny fikajiana ltvSary torohayltvfinday fampiharanafampiharana finday ltvmarketing amin'ny findayfampiharana finday roiinona ny ltv